ရန်ကုန်က အီးပီစီ YESC - Call Center 012302285. 6, 7, 8,9ကို လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။
"အမိန့်ရှိပါ". . ဆိုတဲ့အသံမကြားတော့ပါ ။
"ဝိုင်အီးအက်စီ" ကပါ လို့ဖြေတဲ့ မိန်မငယ်အသံ ဖြေပါတယ်။
"ကျနော် ဦးလှအော် ပါခင်ဗျား။ လှိုင်သာယာ နဝဒေးဥယျာဉ် ကပါ။ မီးပျက်သွားလို့ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ သိချင်လို့ပါ" . .လို့ မေးတော့
"အခုပဲ ည၁၀နာရီပါ" . . ဖြေတော့
မိန်းကလေးက "ဟုတ်ကဲ့ပါဦးရေ။ သမီး ပြန် အကြောင်းကြားပေးပါမယ်" ပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်ပါတယ်။
"မီးပြန်လာနေပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီး" . . ပြောပြီး တိုရင်းလိုရှင်း အိုကေ - ပြီးပြတ်သွားပါတယ်။
Call Center ဖုန်းဆိုတော့ ဖုန်းခေါ်ကတည်းက လိုင်းဖုန်းနံပတ်နဲ့ ဖုန်းပိုင်ရှင် မိမိအမည် မိန်းကလေးရဲ့ စက်ပေါ်မှာ ပေါ်နေပြီ။ အသံကြားပြီး. - ဦး သမီး . . သား အန်တီ . . အဘ အန်တီကြီး . . အစ်ကို ညီလေး. . အစ်မ ညီမ . . စတဲ့ စကားလုံးတွေ သုံးနေရတာ ဗမာပြည်ပါ။ “ဦး ... သမီး” လူရှေ့မှာ မရှက်တော့ပဲ တယောက်နဲ့တယောက် ခေါ်နေတဲ့ လင်မယားတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါပြီ။ (ရယ်စရာပါ)။
မြစ်ကြီးနား နဲ့ ထားဝယ် မြို့တွေမှာ တယူနစ် ၃၀၀ ကျပ် အထက် ပေးနေရတော့ ထမင်းဟင်းချက်၊ အဲကွန်းသုံးတာတွေ မလုပ်ရဲဘူး။ မြစ်ကြီးနား က မိမိရဲ့ မိဘများ ထမင်းဟင်းချက်၊ ရေတင်မော်တာသုံး - တလကို မီတာခ ကျပ် ၅ သောင်း ပေးနေရပါတယ်။ ပုသိမ် ၊မုံရွာ၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး အိမ်တွေကတော ၁၀ဆ ဈေးသက်သာလို့ တလ ၅ထောင်ကျပ်ပဲ မီတာခပေးရပါတယ်။ တညလုံ မီးဖွင့်အိပ်တော့ သူခိုးရန် ကင်းလွတ်တာပေါ့။ တလမှ ၅ထောင်ပဲကုန်တာ။ မြစ်ကြီးနားမှာတော့ တညလုံး မီး မဖွင့်ရဲဘူး၊ ဈေးအရမ်းကြီးတာကိုး။
နိုင်ငံတော်ပိုက်ဆံ ခြိုးခြံ ချွေတာ တယ် ဆိုတာက ...
မိမိအနေနဲ့ ပြည်ပမှာ ငွေဝယ်ကျွန်သာသာ နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ပြီး ကြိုးစား ချွေးနှီးစာ အနည်းကျဉ်းစုဆောင်မိလာလို့ (စကားချပ် - ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ မြန်မာသူဌေးများကို မိမိစုဆောင်းငွေ သေးသေးလေးဟာ အဖျားပင် မမှီပါ) ဗမာပြည်ကို ပြန်လာတယ်။ ပါလာတဲ့ ချွေးနှီးစာ ဒေါ်လာတွေကို ငွေမဲလို့သတ်မှတ်ခံရတယ်။ (ဒါမြန်မာပြည်လေ)။ ငွေဖြူဖြစ်အောင် လာဘ်စား (လာဘ်ပေးရ) တာ မူးယစ်သမားတွေနဲ့ တန်းတူ အကြံအဖန် လုပ်ရပြန်တယ်။ ရေးတာတွေ လမ်းလွဲသွားပြီ။ လျှပ်စစ်ပဲ ပြန်ရေးပါမယ်။